I-Youthfull Escape e-Nicosia
Egkomi, Nicosia, i-Cyprus
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Katalin
Leli yifulethi elihle elinekamelo elilodwa elisendaweni yase-Engomi eNicosia. Idizayinelwe ukusingatha abangani ngokunethezeka hhayi ukubaphoqa ukuthi balale emibhedeni yabantu ababili.
Ukukhethwa kwefenisha kuyisimanje futhi kuncane, i-tv ihlakaniphile, i-intanethi iyashesha. Ikhishi lihlonyiswe kodwa lincane ngohhavini omncane okahle kanye ne-ceramic top. Igumbi lokugezela licocekile futhi lincane, kumuntu oyedwa ngesikhathi.
Lesi sakhiwo sisendaweni ebangeni lokuhamba ngezinyawo ukusuka ezitolo zekhofi eziningana kanye nenqwaba yezindawo zokudlela ezinhle, ezihlinzeka ngezinhlobonhlobo zokudla kwama-Italian, Japanese, English, Chinese and international. Inxanxathela yezitolo iseduze, isuphamakethe enkulu ikuhambo lwemizuzu engu-7. Idolobha elidala elibiyelwe ngodonga laseNicosia liwuhambo lwemizuzu eyi-15-20 kuphela, kanti indawo iseduze namanyuvesi namanxusa, okwenza ifanele izivakashi zalezi zikhungo.
I-Flat 309 iklanywe kucatshangwa ngomqondo omusha nomusha, izindonga zinemibala futhi ubuciko abuyona into engokomfanekiso.
Ifaka i-smart TV, ukushisisa kwenziwa ngezifudumezi zikagesi nokuhlukaniswa okusha njengoba kuzofakwa amayunithi ekuqaleni kwehlobo, ngo-April 2020.
Ekamelweni lokuhlala usofa ungavulelwa umbhede, ngakho-ke singakwazi ukuhlalisa kahle abantu abadala abangu-3.
Ifulethi elisanda kulungiswa kabusha, elisesitezi sesi-3 sesakhiwo esinezitezi ezi-5, Ibhilidi ngokwalo lakhiwa ngo-1972 elingase libe yisiphazamiso ekuqaleni, kodwa ligcinwe kahle futhi liphephe ngokwedlulele, futhi balungisa indawo yokupaka ukuze ibe yinhle. kusukela ngo-Ephreli futhi ivikeleke kakhulu ngamakhamera nokufinyelela kwekhadi endaweni yokupaka.
4.30(23 okushiwo abanye)
4.30 out of 5 stars from 23 reviews
4.30 · 23 okushiwo abanye
Kugcwele izindawo zokudlela, izitolo zekhofi, izindawo zokuphuza utshwala zamazwe ngamazwe kanye nekhasino esanda kuvulwa e-Nicosia kukude nokuhamba ngezinyawo
Idolobha elibiyelwe ngezindonga laseNicosia liyimizuzu engama-20 ukusuka esakhiweni.
Kwabagijimi/abahamba ngamabhayisikili kukhona i-Linear park, eqala u-2km yakha isakhiwo bese igijima inqamule idolobha ithatha ibanga elingu-10.5km ukuya nokubuya.
Ngihlala ngitholakala ngocingo nazo zonke izinhlelo zokusebenza, ngihlala imizuzu eyi-10 ukusuka lapho.
Izilimi: English, Ελληνικά, Magyar
Ngena: 14:00 - 02:00
Hlola ezinye izinketho ezise- Egkomi namaphethelo